Maitiro ekugovana Saved Passwords Uchishandisa AirDrop | IPhone nhau
Maitiro ekugovana Saved Passwords Uchishandisa AirDrop
Imwe yesarudzo dzatinogona kuwana paIOS uye macOS ndeyekugovana mapassword ewebhusaiti uchishandisa AirDrop. AirDrop inoshandiswa pazvinhu zvakawanda uye kunyangwe chiri chokwadi chinonyanya kushandisa tarisa kuendesa mifananidzo kana zvinyorwa kubva kune imwe kifaa kuenda kune imwe, ichipfuura mawebhusaiti zvinongedzo kana kunyange mavara echivande emarudzi ese akachengetwa pa iPhone yedu.
Izvo zvakanaka kuti uzive kuti chinhambwe chakakosha mune idzi kesi uye tinofanirwa kuve neiyo iPhone, iPad kana Mac padhuze kuti tikwanise kupasisa mapassword aya, pasi pechikamu cheBluetooth kana WiFi. Kana tikasangana nepfungwa iyi zviri nyore kwazvo kugovana mapassword akachengetedzwa uchishandisa AirDrop uye nhasi tichaona kuti zvinoitwa sei.
Chinhu chekutanga chatinofanira kujekesa nezvacho ndechekuti isu tinoda iOS 0 kana yepamusoro uye macOS Mojave 12 kana yepamusoro. Zvirinani izvo zvinodiwa zviri pachena uye tinoda zvimwe zvishoma kunze kwekuva sezvatinotaura chimwe chigadzirwa padhuze nechimwe. Kuti titumire saiti mapassword isu tinofanirwa kuvhura iyo IPhone Zvirongwa, kuwana mapassword uye maakaundi uye tinya pa Cons. yewebsite uye maapplication:
Izvo zvichatikumbira isu kuvhura kuburikidza neTouch ID, Face ID, nezvimwe, uye tobva tapinda muwebhusaiti tobatirira pazita redu kana password kusvikira sarudzo "Copy, AirDrop" yaonekwa uye ipapo tinogona kuigovana zviri nyore.
Pane macOS Mojave 10.14 kana kumusoro isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Isu tinovhura Safari uye sarudza Zvaunoda
Dzvanya paPasswords tebhu uye wozopinda ne password yemutungamiri
Tinya kaviri pazita kana zita uye tinogovana
Muchokwadi, zvese zviri nyore kupfuura zvinoita uye tinogona kushandisa iyi sarudzo kukurumidza kugovana mapassword pakati pemidziyo yedu. Kana tangova nepassword iripo uye tinozvipa kuti tigovane kuburikidza neAirDrop, chimwe chishandiso chinobva chavhura iwo marongero acho uye zvinotitungamira kuchikamu chepassword. Mushure mekuzvizivisa pachedu, tinogona kusarudza kuti tiwedzere pasiwedhi nyowani kuiyi keychain. Iri nyore chaizvo kushandisa uye rinonakidza basa rekugovana mapassword munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugovana Saved Passwords Uchishandisa AirDrop
Iyo iPhone XR inoramba kutengwa pamberi pehama dzayo